Shirkaddaadu ma la kulantay isbeddelo ku saabsan qaybteeda waxqabadka? Haddii aad tahay loo shaqeeye ama shaqaale, Kala-guurka Wadajirka ah ayaa kaa taageeraya sidii aad u bilaabi lahayd dib-u-tababbar xagga xirfadaha rajada leh ee gobolkaaga, si deggan oo ammaan ah. Nidaamkan waxaa loo dejiyay qayb ka mid ah qorshaha France Relance.
Hawlgalkan oo socday illaa iyo Janaayo 15, 2021, Kala-guurka Wadajirka ah wuxuu u oggolaanayaa shirkadaha inay saadaaliyaan isbeddelada dhaqaale ee waaxdooda iyo inay taageeraan shaqaalahooda mutadawiciinta ah inay dib ugu tababaraan hab aamin ah, deggan oo diyaarsan. Iyagoo xafidaya mushaharkooda iyo qandaraaskooda shaqo, shaqaalahan waxay ka faa'iideystaan ​​tababaro ay maalgeliso Gobolka, iyadoo ujeedadu tahay helitaanka xirfad rajo leh isla aagga qabashada.
Waa maxay xirfad rajo leh?
Kuwani waa shaqooyin ka soo ifbaxaya aagag cusub oo waxqabadyo ah ama shaqooyin xiisad ka taagan qaybaha la halgamaya qorista.
Sideen ku ogaan karaa xirfadaha rajada leh ee gobolkayga?
Si si sax ah loo aqoonsado xirfadaha rajada leh ee ka jira dhulalka, liisaska waxaa soo diyaariyey Agaasinka ka dib markuu la tashaday Guddiga Gobolka ee Shaqada, Hanuuninta iyo Tababarka Xirfadaha. Hal ujeedo: in mudnaanta la siiyo maalgelinta dariiqyada xirfadeed ee shaqaalaha galaya nidaamkan cusub ee ku wajahan xirfadahan.
Kala guur wadareed: koorsada tababarka cusub ee lagu saadaalinayo laguna taageerayo dib u tababarida shaqaalahaaga July 10th, 2021Tranquillus
READ Shaqaalaha naafada ah: qodobbo cusub oo ku saabsan adeegga bulshada
horeKu bixinta saacadaha dheeriga ah ee lacagta caymiska waa fikrad xun
socdaSare u kaca meteoriga ee Stéphanie, Maareeyaha QSSE ee Bureau Veritas